ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးတည်ဆောက်ခြင်း• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
အပေါ် Posted ဧပြီလ 19th, 2021
အရှေ့မစ်ဆူရီ၏ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးအစီအစဉ်များအားကောင်းလာစေရန်၊ ချေးငွေလျှောက်ထားရန်နှင့်ဘဏ်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်မေလတွင်အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Zoom မှတစ်ဆင့်ပေးသောဤတစ်နာရီကြာအစည်းအဝေးများသည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးလအတွင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတွင်ပြုလုပ်သည်။ အဆိုပါအတန်းနှင့်အတူပူးပေါင်း။ တင်ပြကြသည် Urban League ၏အမျိုးသမီးစီးပွားရေးစင်တာ နှင့် အသေးစားစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုစတင်ရန်စီစဉ်နေပါသလား။ ဘာကြောင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မစခင်ဘာကြောင့်ရေးသင့်တယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။ ဤသင်ခန်းစာသည်စီးပွားရေးစီမံချက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော၊ တိုးတက်မှုအတွက်ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးရန်၊ သင်၏အနာဂတ်ဘဏ္needsာရေးလိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ချေးငှားသူများအားဆွဲဆောင်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ Eventbrite တွင်သင်၏နေရာကိုထားပါ.
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ချေးငွေရှာနေပါသလား။ သင်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီသင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုလေ့လာပါ။ ဤသင်ခန်းစာသည်ချေးငွေလျှောက်ထားမှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်မည်သည့်အခြေခံစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Eventbrite တွင်သင်၏နေရာကိုထားပါ.
သင်ချေးငွေလျှောက်ထားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ သင်၏အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အခြားရန်ပုံငွေရွေးစရာများအကြောင်းလေ့လာပါ။ ဤသင်ခန်းစာသည်ချေးငွေလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစမှအဆုံးအထိဖော်ပြလိမ့်မည်။ ရိုးရာဘဏ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှသင့်အားငြင်းဆန်သည့်အခါ၎င်းသည်အခြားနည်းလမ်းများကိုလည်းဖုံးကွယ်လိမ့်မည်။ Eventbrite တွင်သင်၏နေရာကိုထားပါ.
သင့်မှာဘဏ်မိတ်ဖက်ရှိပါသလား ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များအကြောင်းနှင့်မည်သည့်ဘဏ်မိတ်ဖက်သည်သင့်အတွက်သင့်တော်မည်ကိုလေ့လာပါ။ ဤသင်ခန်းစာတွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး မှမည်သည့်အရာကိုရှာဖွေသင့်သည်နှင့်မည်သည့်ဘဏ်မိတ်ဖက်သည်သင့်အတွက်သင့်တော်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အကြံပေးချက်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဘဏ်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသင်လေ့လာလိမ့်မည်။ Eventbrite တွင်သင်၏နေရာကိုထားပါ.
DT2 • Downtown Dutchtown ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားရှိမိတ်ဖက်များကကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်အသစ်တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သောတည်ထောင်ထားသည့် Dutchtown စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအားအရင်းအမြစ်များကိုသယ်ဆောင်ရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အလည်အပတ် dutchtownstl.org/business သို့မဟုတ်ငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ Dutchtown စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ Facebook အုပ်စု ပိုပြီးထွက်ရှာရန်။
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, DT2နှင့် ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဧပြီလ 19th, 2021 .
ဒိန်းမတ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း